Oduulee gaggabaaboo biyya keessaa fi alaa - BBC News Afaan Oromoo
Oduulee gaggabaaboo biyya keessaa fi alaa
6 Fuulbaana 2018
Sudaan Kibbatti wayita loltootni yakka raawwataniif murteen itti kennamu kun isa jalqabaati.
Naannoo Beenishaangul Gumzi magaalaa daalattii fi naannosheetti Waldhabdee sanbata darbe mudatee ,lubbuu namoota 12 olii galaafateen booda jiruu fi jireenyi namootaa yaaddoo keessa waan galeef magaalota naannoo jiranitti qubachiisaa jirra jedhu Bulchaan Aanaa Mana Sibuu Obbo Kumarraa Bakaree.
''Hanga eda galgalaatti namoota 1,108 gara mana barnootaa sadarkaa gidduu galeessaa Mandiitti walitti qabnee jirra.''
Ganda Alaltuu Gombii jedhamurratti namoonni 136 ta'an qubatanii jirus jedhaniiru. Aanaa Tsadaal jedhamu keessas namoonni kuma lamaa ol ta'an qubachuu dabalanii himaniiru.
Hokkora Benishaangulitti dhalaten namoonni 4 du'an, 26 miidhaman
"Lubbuudhaan bakka kanaa bahuun barbaada"
Loltootni Sudaan kibbaa 10 hojjettuu gargaarsaa lammii biyyaalaa dirqiin gudeeduu fi waggaa lama dura gaazexessaa ajjeesuun himataman hidhaan waggaa7 hanga umurii guutuun itti murtaa'e.
Gidduu gallii annisaa elektirikaa galaana keessatti Qilleensarraa maddisiisun addunyaarraa guddicha ta'e Kaaba lixa Inglaanditti hojii eegale. Tarbaaynaroonni gurguddoon 87 meetira 200 dheeratan dandeettii manneen kuma dhibba jahaf ifa kennuu qabu jedhameera.
Dubartiin Ameerikaa kophee hiilii kaawwatte keessa kokeenii/ waan sammuu hadoochu/ dhoksuun Awustiraaliyatti osoo galtuu qabamte hidhaa waggaa 7 fi walakkaan adabamte.
Dubartiin Lammii Beeljiiyeem Televizhinii dhuunfaarratti haala qilleensa gabaastu gurrachuum isheetiin arrabsoo sanyummaa irra gahuuf obsi qabdu dhumnaan deebii kennite. Deebiin marsaalee hawaasaarratti kennite kun deeggarsas mormiis kaaseera. Dhaabbatni hojjettuuf akka ishee deeggaru himeera.
Miseensonni bulchiinsa Tiraamp biyyattin 'daandiirraa akka hinmaqne'' gochuuf murtee pirezidantii Yunaayitid Isteet gufachiisuuf hojjetaa akka jiran qondaalli olaanaa bulchiinsa Tiraamp himan.
Pirezidantiin biyyatti bitaa mirga osoo hin ilaaliin murteessaa jiru jechuun qondaalli eenyuaan isaanii ifa hin bane kuni fuula editoriyaalii gaazexaa 'New York Times' jedhamurratti barreessaniiru.
"Lubbuudhaan bakka kanaa bahuun barbaada" - miidhamtoota walitti bu'iinsa Beenishaangul
Hokkora Benishaangul Gumuzitti dhalaten namoonni 4 du'an, 26 miidhaman
Kuusaa suuraa, Kabaja Ayyaana Cuuphaa bara kanaa suuraan
Aartiisit Nuhoo Goobanaa kan umuriisaa guutuu tokkummaa Oromoo lallabe du'aan boqate
19 Amajjii 2022
Wadaajii, Sirbaa fi Gombisa Fardaa - Qabiyyeewwan aadaa Ayyaana Cuuphaa
Itoophiyaan bara 2021 keessa interneetiin addaan cituusaatiin $164.5 mln dhabde - gabaasa
Loogoo jijjiirachuu isaatiif komii ummataa irratti ka'aa jiruuf BBO maal jedha?
15 Amajjii 2022
'Namaaf sagalee ta'anii bu'aasaa arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru'
14 Amajjii 2022
Waraana Itoophiyaa keessaa maaltu adda godha, akkamiin ammoo falli argamaaf?
Gulantaa Fiild Maarshaal Afrikaa keessaa biyyoota kamfaatu qabu, akkamiin argatan?
13 Amajjii 2022
Hiikamuun namoota siyaasaa maaliif nama hunda hin gammachiifne?
Godinni Baalee Bahaa hongee mudateef birmannaa gaafate
Gaanaan Komoroosiin mo’amtee Waancaa Afrikaa keessaa baate
Lammileen Ertiraa guyyaa tokkotti dhukkubsataa kaansariif $500,000 walitti buusan
Sa'udiin warra oduu hin mirkanoofne gadhiisan hidhaa buusuuf
Barsiistuu duraanii Yunvarsiitii Heelsinkii amma Naqamtetti loon horsiisan, Dr Alamtsahay
Hanqinni wal'aansa fayyaa Kaaba Itoophiyaatti mudate na yaaddesse - Koree Fannoo Diimaa
Yeroo dhuma kan haaromfame: 19 Amajjii 2021